araka ny fanapahan-kevitry ny Organe Mixte de Conception na ny OMC Antananarivo, tarihIn’ny prefet Jeneraly Ravelonarivo Angelo Christian omaly alarobia. Olona manodidina ny 3000 lahy sy vavy no efa vonona amin’izany, hiasa andro aman’alina hanampy ny mpitandro filaminana amin’ireo distrika enina eto an-drenivohitra. Tsy maintsy hadihadiana lalina na mandalo “enquete de moralité » vao afaka miasa. Omena “Badge” sy” Gilet” ary fitaovam-piadiana (arme blanche) izany hoe tsy basy izy ireo hoenti-miasa. Fepetra iray napetraka ihany koa ny hoe mila fantatra mazava ary misoratra anarana ao amin’ny fokontany ny olona rehetra monina na mandalo ao, mba hanamafisana sy hitandroana ny fandriampahalemana.